Izigidi zabantu phaya zisebenzisa imali eninzi kwiimveliso zokulwa ukuguga njenge I-Nicotinamide Riboside chloride. Nangona ukwaluphala yinkqubo yendalo, abantu abafuni kujongeka ngathi badala. Iindaba ezimnandi zezokuba, kukho iimveliso ezininzi phaya ezinganceda ngale nto kwaye iNicotinamide Riboside Chloride yenye yazo. Kule posi, siya kugxila kwimveliso.
Siza kukunika ulwazi malunga nayo, ukuba isebenza njani, izibonelelo zayo, ukuyithenga phi, kunye neengcebiso ezongeziweyo zokukunceda wenze ngcono.
Yintoni uNicotinamide Riboside Chloride?
Ke, masiqale ngowona mbuzo osisiseko. Khohlwa malunga negama elikhulu nelinzima. I-Nicotinamide Riboside Chloride CAS 23111-00-4 Ngokwenyani yenye indlela yeVitamin B3, edla ngokubizwa ngokuba yiacic. INicotinamide Riboside Chloride ikwabizwa ngokuba yi-niagen okanye icothwe njengeNR. Nje ukuba ungene ngaphakathi emzimbeni, uyakuguqulwa INicotinamide adenine dinucleotide okanye i-NAD +. I-NAD + yenye yezona enzymes zibaluleke kakhulu kubuchwephesha bomntu.
Inoxanduva lokuphembelela inani leenkqubo eziphambili zebhayoloji kubandakanya ukuguqulwa kokutya ube amandla kunye nokwenza amandla okhuselo afumaneke kwiseli nganye. I-enzyme nayo inokubaluleka ukulungisa i-DNA eyonakeleyo kwaye inokuba nesiphumo esongeziweyo ekukhuthazeni ukwaluphala okunempilo. Umzimba unokuvelisa eyakho i-enzyme ye-NAD + ngokulula ngaphandle kokuxhaswa. Inxalenye elusizi kukuba, njengoko uqhubeka ukhula, inani le-NAD + eveliswa ngumzimba liyancipha.
Eyona nto ibalulekileyo, abantu abadala baya kuba namanqanaba asezantsi ale enzyme ebalulekileyo xa kuthelekiswa nabancinci. Kulapho ukubonelelwa kubaluleke kakhulu. Sebenzisa izongezelelo zeNicotinamide Riboside Chloride zokuphucula amanqanaba eNAD +, ngakumbi phakathi kwabantu abadala, inokubonelela ngezibonelelo ezininzi ezintle.
Okokuqala, ukuhla kwamanqanaba e-NAD + kuye kwafaniswa nesifo esinganyangekiyo esihambelana nobudala kubandakanya isifo seswekile, i-Alzheimer's, ukungaphumeleli kwentliziyo, kunye nokulahleka kombono. Kukho obunye ubungqina obubonisa ukuba ukunyuka kweNAD + kunokuphinda kuguqule iimpawu zokwaluphala. Ekugqibeleni, ukusetyenziswa kwesongezo se-Nicotinamide Riboside chloride eyongeziweyo akuncedi kuphela ukuba ubonakale umncinci kwaye uzithemba ngakumbi. Kuyanceda ukunciphisa umngcipheko wokugula okunganyangekiyo njengokuba usaluphala.
Ngaba isebenza njani iNicotinamide Riboside Chloride?
Eyona njongo iphambili yeNicotinamide Riboside chloride vs i-niacin isongezelelo kukuphucula amanqanaba e-NAD + emzimbeni. I-NR yivithamini efumaneka kwiindawo ezincinci zokutya kwethu okuqhelekileyo. Nje ukuba into ifakwe, iya kutshintshelwa kwiinkqubo eziqhelekileyo ze-metabolic ziye kwi-NAD +. Yintoni eyenza i-NR ibe yinto efanelekileyo kubantu abajonga ukunyusa amanqanaba e-NAD + yinto yokuba ifumaneke kakhulu.
Njengoko sele siphawulile apha ngasentla, i-NR yifom yeVitamin B3. Zininzi imithombo yokutya apho inokuhambisa uVitamin B3. Nangona kunjalo, iqondo apho iNicotinamide Riboside Chloride ifakwe emzimbeni ngokukhawuleza kuthelekiswa nezinye iindlela ze-B3 ekutyeni. Oku kuyenza ibe yeyona ndlela inokuthenjwa neluncedo yokufakelwa kwe-NAD + emzimbeni womntu.
IziBonelelo zeNicotinamide Riboside Chloride / Iziphumo
Izibonelelo zeNicotinamide Riboside Chloride zinokujongwa kuphela ngokunxulumene nendima ye-NAD + emzimbeni.
Kungenxa yokuba ukuxhaswa kwe-NR kuya kuphakamisa amanqanaba e-NAD + kwaye ukujika le coenzyme ebalulekileyo iza kuzisa oku kulandelayo Izibonelelo zeNicotinamide Riboside Chloride:
Imveliso eyandisiweyo ye-NAD + emzimbeni inokubangela ukuveliswa kwee-enzymes ezithile ezinokunceda ukwandisa ukwaluphala okunobubele. Kwizifundo zezilwanyana, i-coenzyme ikwazile ukuqalisa ukuvelisa i-enzyme ebizwa ngokuba yi-Sirtuins.
Ii-Sirtuins zabonakala ziphucula ixesha lokuphila kunye nempilo ngokubanzi yezifundo zovavanyo lwezilwanyana ngexesha lezifundo zeklinikhi. Olunye uphononongo lukwabonisa ukuba iiSirtuins zinokunceda ukukhuthaza uxinzelelo loxinzelelo kuluntu kunye nokulungiswa kweDNA eyonakalisiweyo.
2. Ukuphucula i-Cell Defense Mechanism kwi-Brain
I-NAD + ikwazi nokukhusela iiseli zengqondo kwingqondo engahambelaniyo, ngakumbi nokuguga. Olunye uphando lubonisa ukuba i-NAD + inokulawula ukuveliswa kweprotein ebizwa ngokuba yi-PGC-1-alpha. Iprotheyini ibaluleke kakhulu ukukhusela iiseli kuxinzelelo lwe-oxidative. Inokuphucula kunye nokulungisa imisebenzi ye-mitochondrial kwiiseli zobuchopho, ekhokelela kwimpilo yengqondo engcono.
Kukwakhona uninzi lophononongo lophando olunxibelelanisa uxinzelelo lwe-oxidative kunye nemisebenzi eyonakeleyo ye-mitochondrial kwiiseli zobuchopho ezineengxaki zobuchopho ezinxulumene nobudala njenge-Alzheimer's, Parkinson's nezinye. Isenzo se-NAD + ekunciphiseni ezi nkqubo sinokunciphisa kakhulu umngcipheko IAlzheimer kunye nezinye izifo zobuchopho obuthathaka.
Ukusebenza kwe-NAD + koku kuyinto ephezulu kakhulu. Kwizifundo ezithile zezilwanyana apho iimpuku ezineAlzheimer zanyangwa ngeNicotinamide Riboside Chloride, amanqanaba e-PGC-1-alpha kwingqondo akhule phakathi kwe-50 ne-70%. Ekupheleni kwezifundo, iimpuku eziphathwe nge-NR zabonisa ukuphucuka okubonakalayo kwimisebenzi esekwe kwimemori.
3. I-Nicotinamide Riboside Chloride Ngamana Uncedo kwiingxaki zeentliziyo
Umngcipheko wokungaphumeleli kwentliziyo unyuka kakhulu ngokuguga. Ukusilela kwentliziyo kukwangumbandela oqheleke kakhulu enyanisweni kungoyena nobangela wokufa kwihlabathi jikelele. Impilo yentliziyo ngokubanzi ixhomekeke kwizinto ezininzi nangona kubandakanya ukutya okufanelekileyo kunye nokuzivocavoca. Kodwa kukho izinto ezithile ezinokuthi zinciphise umngcipheko. Ukunyuka kwemveliso ye-NAD + yenye yezi zinto.
Izifundo zovavanyo ezenziwe kwizilwanyana zifumene ukuba ukwanda kwemveliso ye-NAD + kuncede ukubuyisela utshintsho olunokuba yingozi kwimithambo yegazi ebangelwa kukuguga. Kwezinye izifundo ezenziwa ngabantu, amanqanaba aphezulu e-NAD + akhokelele ekunciphiseni kokuqina kwe-aorta. I-NAD + nayo yabikwa ukunciphisa umngcipheko wegazi we-systolic.
Oku kuthetha ukuba kukho amandla okusebenzisa iNicotinamide Riboside Chloride njengesongezelelo esinokubangela ukunciphisa umngcipheko wesifo sentliziyo. Nangona kunjalo, kusekho isidingo sophando olongezelelekileyo lomntu ukuze siqonde ngcono amandla anokubakho.
Ukongeza kwezi zibonelelo, iicotinamide Riboside chloride inganceda nge Ukuhla ukusinda. Kungenxa yokuba amanqanaba aphezulu e-NAD + anokunyusa amazinga e-metabolism emzimbeni. Amanqanaba aphezulu e-NAD + nawo athintela ukonakaliswa kweDNA kunye noxinzelelo lwe-oxidative, izinto ezimbini ezinxulumene nomhlaza. I-coenzyme inokuba neempembelelo ezilungileyo ekukhuthazeni ukwaluphala kwemisipha esempilweni.
Uyisebenzisa njani iNicotinamide Riboside Chloride
INicotinamide Riboside Chloride ihlala ithengiswa njenge-niagen. Imveliso iyathengiswa kwiicaphule kwi-intanethi kwaye ingena usebenzisa umlomo.
Nangona uninzi lweemveliso ze-niagen ziqukethe iNicotinamide Riboside Chloride, ezinye zinokufaka ezinye izithako ezongezayo kubandakanya ipolyphenol okanye iPterostilbene. Abavelisi bavame ukucebisa umthamo weyona kloride ye-Nicotinamide Riboside ye-250 mgs kunye ne-300 mgs ngosuku. Oku kulingana ngokulinganayo neecuba ezimbini zemveliso mihla le.
INicotinamide Riboside Chloride vs. Nicotinamide Riboside (NR)
Umahluko phakathi kwezi zinto zimbini kukubumba. Nangona kunjalo, banokuphantse babe ngoomatshini bokusebenza. Umsebenzi wazo zombini i-Nicotinamide Riboside Chloride kunye neNicotinamide Riboside kukonyusa ukuvelisa kwe-NAD + emzimbeni. Ezi zimbini ziindlela ezizezinye zeVitamin B3.
INicotinamide Riboside Chloride vs Nicotinamide Mononucleotide (NMN) U
Ingxoxo yeNicotinamide Riboside chloride vs I-NMN ayisiyonto ingako. INicotinamide Mononucleotide (NMN), njengeNicotinamide Riboside Chloride, sisiphumo se-niacin. Ezi zinto zimbini ziyafana ngendlela ezisebenza ngayo. Bangenisiwe kwaye baguqulwe baba yi-NAD + nje ukuba bangene emzimbeni womntu. Ukongeza, zozibini ezi zinto zenziwe zadityaniswa ukusuka ekudibaneni kwembambo kunye naseNicotinamide.
Kukutya ntoni okuqulathe iNicotinamide Riboside?
Uninzi lokutya kwethu luqukethe izixa ezincinci kakhulu zeNicotinamide Riboside. Nangona kunjalo, kubantu abaninzi, ukutya okuphakathi, okunemithamo yeVitamin B3, kufanelekile ukubonelela ngokufunxa kweNicotinamide Riboside.
Nazi iintlobo zokutya ezinokukunceda koku:
Ubisi lobisi- Ubisi lweenkomo luza lulayishwe ngeNicotinamide Riboside eninzi.
Intlanzi-Ungafumana kwakhona i-NR kwiNtlanzi. I-Tuna, isardadi, kunye nesalmon zonke zinamanqanaba amahle kakhulu eNicotinamide Riboside.
IbhiyaKuyamangalisa ukuba ibhiya inokukunceda ukongeza iNicotinamide Riboside. Kungenxa yokuba ibhiya inegwele njengenye yezona zinto ziphambili kwaye igwele liyaziwa ukuba liphezulu kakhulu kwi-NR.
Inkukhu-Ukutya inkukhu kungonyusa amanqanaba e-NR emzimbeni wakho. Ukuhanjiswa kwenkukhu, eyosiweyo, eyosiweyo, okanye isityu, iqulethe ukuya kwi-9.1 milligrams yeNicotinamide Riboside.
Imifuno eluhlaza- Imifuno eluhlaza nayo iyacetyiswa. Zilayishwe kwimithwalo yeevithamini, kubandakanya ne-B3 ebaluleke kakhulu eya kuthi ibaluleke kakhulu kukudityaniswa kwe-NAD + emzimbeni wakho.
Yeast Okokugqibela, ukuba awukwazi ukufumana ngokwaneleyo iNicotinamide Riboside kwibhiya, mhlawumbi unokufuna ukungenisa igwele ngokwahlukeneyo. Igwele liphezulu kakhulu kwiNicotinamide Riboside kwaye kufuneka ibandakanywe kwisidlo sakho.
Ngaba ikhuselekile iNicotinamide Riboside Chloride?
I-Nicotinamide Riboside chloride bulk sisongezelelo esikhuselekileyo esisetyenziswayo kodwa njengayo nayiphi na imveliso, ineziphumo ebezingalindelekanga ezininzi ekufuneka unolwazi ngazo. Kwezinye izifundo zabantu, izifundo zovavanyo zanikwa phakathi kwe-milligrams ezili-1000 kunye nee-milligram ezingama-2000 zeNicotinamide Riboside Chloride kwaye azange zibone zimpawu ziyingozi. Ukuza kuthi ga ngoku, abavelisi beNicotinamide Riboside Chloride bacebisa phakathi kwe-200 mgs kunye ne-300 mgs yemveliso ngosuku.
Ngaphandle kwengxelo egciniweyo yezokhuseleko, iNicotinamide Riboside Chloride inokuba neziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa ukugcina engqondweni. Okokuqala, abanye abantu baye baxela ukuziva becaphukile emva kokusebenzisa imveliso. Ngamanye amaxesha, abaguli baziva belahlekile kunye neentloko ngenxa yeNicotinamide Riboside Chloride. Ayinto ingaqhelekanga ukuva imiba yokugaya ukutya kubandakanya ukungalungelelani kwesisu kunye nesisu.
Nangona kunjalo, ubukhulu beNicotinamide Riboside chloride yecala leziphumo zahluke kakhulu komnye umntu ukuya komnye. Abanye abantu abazi nokuba nazo ezi ziphumo. Ukuba ngaba ukho kulo naliphi na amanye amayeza, thetha ugqirha wakho kuqala ngaphambi kokuba usebenzise iNicotinamide Riboside Chloride.
INicotinamide Riboside Chloride Thenga kwi-Intanethi
Ukuba uziva ukuba iNicotinamide Riboside Chloride inokunika izibonelelo ezithile ezimangalisayo ngempilo yakho iyonke, uya konwaba ukwazi ukuba imveliso iyafumaneka kwiivenkile ezininzi. Ungathenga kwakhona kwi-Intanethi okanye ngaphandle kweintanethi. INicotinamide Riboside Chloride ithengiswa kakhulu njenge-niacin. Iza kwiicaphule kakhulu.
Nangona kunjalo, unokufuna ukuthatha ixesha lakho njengoko ukhangela umthengi. Nangona bebaninzi abathengisi abaza kukubonelela ngemveliso esemgangathweni, kusekho inani elikhulu leendawo eziyinyani ezifuna ukukukhathaza.
Nazi ezinye iingcebiso eziya kukunceda ufumane abathengisi bokwenyani:
Jonga uphononongo. Ihlala ingumbono omkhulu ukwazi ukuba abanye abathengi bathini malunga nomthengisi ngaphambi kokuba uthenge.
Jonga amaxabiso ngokunjalo. Nangona nje I-Nicotinamide Riboside Chloride uthenga ayibizi kakhulu, ayibizi kangako. Abathengisi abathengisa le mveliso ngamaxabiso aphantsi angenangqondo kufuneka baphephe.
Isenokuba licebo elihle ukucela ingcebiso ngokuthe ngqo. Endaweni yokutsiba nje kwi-intanethi kwaye uzame ukufumana izongezo zeNicotinamide Riboside Chloride, thetha nomntu ozithengileyo ezi mveliso ngaphambili kwaye ubone ukuba zingakunxibelelana nomthengisi onyanisekileyo. Oogqirha nabo banokuba nezimvo ezithile zokuba uqale phi kunye nolwazi oluthe kratya kwiNicotinamide Riboside chloride vs NADH.
INicotinamide Riboside Chloride sisongezelelo esaziwa ngokuchasene nokwaluphala. Inokukunceda ukubuyisela umva imiqondiso yokuguga kwaye uhlale usempilweni efanelekileyo. Isikhokelo esingentla kufuneka sikuncede ufumane imveliso yenyani phaya.
1.Yintoni uNicotinamide Riboside Chloride?
2.Isebenza njani iNicotinamide Riboside chloride?
3.Izibonelelo zeNicotinamide Riboside Chloride / Iziphumo
4.Usebenzisa njani iNicotinamide Riboside Chloride
5.Nicotinamide Riboside chloride vs.Nicotinamide Riboside (NR)
6.Nicotinamide Riboside Chloride vs.Nicotinamide Mononucleotide (NMN）)
7.Kukuphi ukutya okuneNicotinamide Riboside?
8.Ngaba iNicotinamide Riboside Chloride ikhuselekile?
9.Nicotinamide Riboside Chloride Thenga kwi-Intanethi
2020-01-22 isilumkiso Nootropics
Malunga nesilumko sendlela
Hayi. U-668, uXiangyin Road, kwiSithili saseYangpu, ngo-200433, eShanghai, eChina
I-Pterostilbene Vs Resveratrol: Yeyiphi eNgcono kwiMpilo yakho? 2020-08-26
Izibonelelo ezili-10 eziPhezulu zezeMpilo ze-Glutathione Kumzimba wakho 2020-06-06
Izinto ezingafunekiyo zeRegayisi ebomvu: Izibonelelo, iDosi, kunye neziphumo zeSide 2020-05-20
Izibonelelo eziMnyama zeGarlic Extract zeZempilo kunye nokuSebenza 2020-05-14
Biza nathi ngokusebenzisa Skype
Bhalisa isiteshi sethu seYouTube